23 Jul 2019 - 9:16am
Donald Trump has dismissed Iran's spy claims
Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa gaashaanka ku dhuftay hadal kasoo yeeray Iran oo ay ku sheegtay inay qabatay basaasiin Maraykan ah wuxuuna madaxweynuhu ku tilmaamay Iran "dal gabi ahaanba isku dhexyaacay". Tan ayaa ka danbaysay m...
US hopeful on Afghan war solution
Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu rajo wayn ka qabo in RW Pakistan Imran Khan uu ka caawin karo dhedhexaadin lagusoo afjaro dagaalka ku dhawaad 18 sano ka socday Afghanistan. Isagoo garab fadhiya RW Imran Khan ka hor k...
19 Jul 2019 - 7:05pm
US president, Donald Trump's tweet controversy continues
Muranka ka dhashay fariimaha Twitter ka ee Donald Trump ayaa wali socda
19 Jul 2019 - 6:50pm
Lawyer, Yusuf Mohamud explains welfare fraud
Garyaqaan Yusuf Maxamud oo sharaxaysan cayrta qaladka lagu qaato.
18 Jul 2019 - 4:12pm
Melbourne relative pays tribute to victims of Kismayo attack
Qoyska nin reer Melbourne ah oo ka tacsiyaysay dadkii ku waxyeeloobay weerarkii Kismayo.
17 Jul 2019 - 6:18pm
US President, Donald Trump Vs US congresswomen by Dr Mohamed Abbas
Maxaa kala haysta madaxweyne Donald Trump iyo haweenka xildhibaanada ah? waxaa sharaxaya Dr Mohamed Cabaas
17 Jul 2019 - 4:00pm
Push to raise the rate of Newstart
Dadaal lagu doonayo in la kordhiyo lacagta cayrta ee la siiyo dadka shaqodoonka ah.
17 Jul 2019 - 3:52pm
Director for Puntland diaspora, omar Shire "We encourage parents to send us the skilled youth"
Agaasimaha qurbajoogta Puntland "Waxaan waalidiinta ka rabnaa inay noosoo diraan dhalinta wax baratay"
15 Jul 2019 - 11:29am
Trump tells US congresswomen to go back where they came from
Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa weerar afkaa ku qaaday koox xildhibaano haween ah oo ka tirsan xisbiga Dimoqraadiga, isagoo u sheegay haweenkaas "inay dib ugu noqdaan meelihii baaba'sanaa oo danbiyadu hareeyeen oo ay ka yimaadeen...
13 Jul 2019 - 12:18am
Shirka Difaaca Saxaafada Xorta Ah
Shir Looga Arinsanayey Difaacida Saxaafada Xorta Ah oo kadhacay London waxaa shirka iska kaashada Uk & Canada
12 Jul 2019 - 11:47pm
Gudiga Baarista dadkii Lagu laayey Galmudug
Gudigii Xaqiiqa Raadiska ahaa ee kusugnaa Galmudug oo kawarbixiyeen dhacdadii lagu laayey shacab kasoo jeeday maamulka K/galbeed
12 Jul 2019 - 11:26pm
Yusuf Abdulkadir Abdulahi
10 Jul 2019 - 6:20pm
Galmudug issue with federal minister of state for interior
Wasiirul dawlada arimaha gudaha oo ka waramaya Galmudug
9 Jul 2019 - 3:48pm
9 Jul 2019 - 2:41pm